खास के भएको थियो ? – Complete Nepali News Portal
खास के भएको थियो ?
December 13, 2016	488 Views
राजनीतिक पार्टीका नेताहरुहरुले जनताहरुलाई शान्ति हैन क्रान्तिको खेति सिकाएको नतिजा हो यो घटना !
गल्ति गरेका थिए भने छानबिन समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्थ्यो भने कानून हातमा लिएर अराजक मच्चाउनेहरु आतंककारी चरित्रका हुन !
२७, मङ्सिर काठमाडौं: हिरासतमा ट्याक्सी ड्राइभर राजकुमार लामाको मृत्यु भएपछि आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले राजधानीको जोरपाटी नयाँबस्तीस्थित प्रहरी बिटमा एक हबल्दारसहित केही प्रहरीलाई जिउँदै जलाउने प्रयास गरेका छन् ।
काठमाण्डौकै प्रहरी चौकीमा स्थानीयको आक्रमण, एक दर्जन प्रहरी घाइते , स्थिति तनावग्रस्त
राजकुमारको मृत्युमा प्रहरीको दोष रहेको आरोप लगाउँदै तोडफोड र नाराबाजीमा उत्रिएको सयजनाभन्दा बढीको समूहले प्रहरी कार्यालय, भान्साकोठादेखि लिएर कम्पाउन्डबाहिर र भित्र रहेका चारवटा मोटरसाइकलमा आगो लगाइदिएको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूले सातजना रहेको प्रहरी रहेकै अवस्थामा पेट्रोल छर्किएर बिटमा आगो लगाएका थिए । दोलखा चरीकोट घर भई जोरपाटी बस्दै आएका राजकुमारको शनिबार राति मृत्यु भएको थियो । उनी प्रहरी बिटअगाडि घाइते अवस्थामा भेटिएका थिए ।
‘प्रहरीकै अगाडि यति ठूलो घटना हुँदा के हेरेर बस्यो ? यो घटनामा प्रहरीको पनि संलग्नता छ, जनताको सुरक्षाका लागि राखिएको प्रहरीले के गर्न खोजेको ? ‘ भन्दै आक्रोशित समूहले चौकीभित्र प्रवेश गरी तोडफोड र आगो लगाएको प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय लेखकुमारी पुडासैनीले बताइन् । असईको कमान्डमा सातजनाको दरबन्दी रहेको बिटमा सयजनाभन्दा बढीले तोडफोड गर्न थालेपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेको थियो ।
‘सर हामीलाई मार्न आँटे, के गरौं’ भन्दै फोन आएपछि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका एसपी प्रद्युम्न कार्कीले हवाई फायर गर्न प्रहरी सेटमा निर्देशन दिएका थिए । घटनाले उग्र रूप लिएपछि थप मद्दतका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध, गौशाला, नगर प्रहरी र प्रहरी गणका सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पुगेका थिए । प्रहरीले भीड तितरबितर गर्न ६ राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो । आक्रोशित समूहको आक्रमणबाट सई सन्दीप नापितको नाकको डाँडी भाँचिएको छ । हबल्दार कृष्णहरि बजगाईंले आफूमाथि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाउने प्रयास भएको बताए ।
उनले भने, ‘अचानक सयौंको संख्यामा आएका स्थानीय बासिन्दाले आक्रमण गरेपछि हामीलाई ज्यान जोगाउनै कठिन भयो, म कोठाभित्र छिरें, उनीहरूले पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिएपछि झ्यालबाट निस्केर भागें, केही साथीले पछाडिको पर्खाल नाघेर ज्यान जोगाएछन् ।’
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्तासमेत रहेका एसपी प्रद्युम्न कार्कीले भने, ‘राजकुमारले घटनास्थलनजिकै ट्याक्सी दुर्घटना गराएपछि अर्को ट्याक्सीमा राखेर भट्टीसम्म ल्याइदिएको रहेछ, पछि आफन्तले नै उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको हो । यो घटनामा अहिलेसम्म प्रहरी संलग्नता देखिँदैन ।’ प्रहरीले प्रहरी बिट तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा २५ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
मृतक राजकुमारका पत्नी र एक छोरा छन् । ‘बाबा दिनरातै ट्याक्सी चलाउनुहुन्थ्यो, शनिबार राति अबेरसम्म घर आउनुभएन, एक्कासि उहाँको मृत्यु भएको खबर आयो,’ महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धमा भेटिएका राजकुमारका छोरा समीरले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब हामीलाई कसले पाल्छ ? ‘ समीर स्थानीय बुद्ध एकेडेमीमा कक्षा सातमा पढ्छन् । मृतककी पत्नी सानु लामा बौद्ध वृत्तमै प्रहरीसँग अलापविलाप गर्दै थिइन् ।
शनिबार राति के भयो ?
शनिबार राति राजकुमार र उनकी पत्नी सानु आफन्त उषा तामाङको डेरामा पुगेका थिए । ‘दिदी र भिनाजु सँगै आउनुभएको थियो । दिदीलाई खाना पकाउन डेरामा पठाएपछि भिनाजु एक्लै बाहिरिनुभयो । हामीले बच्चालाई खाना खुवाएपछि सुत्ने तरखर गरिरहेका बेला भिनाजु फेरि आउनुभयो,’ उषाले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘खाना खाऊँ भन्दा उहाँले घरमै जान्छु भन्नुभयो ।
कसैलाई फोन गर्नुभयो र बाहिरिनुभयो । एक्कासि राति १० बजेतिर सटरमा आवाज आएपछि खोलेर हेर्दा भिनाजुलाई ट्याक्सीमा राखिएको रहेछ ।’ उषाका अनुसार बाहिरबाट ‘हामी प्रहरी हौं’ भन्दै सटरमा आवाज दिएर बोलाएका थिए ।
राजकुमारलाई उषाका पति टेककुमार तामाङले अस्पताल पुर्‌याएका थिए । ‘ट्याक्सीमै रहेका भिनाजुलाई सुरुमा बौद्धस्तूप अस्पताल पुर्‌याइयो । चिकित्सकले मृत्यु भइसकेको जानकारी दिएपछि झिनो आशामा नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेल पुर्‌यायौं तर अस्पताल ल्याउनुअगाडि नै मृत्यु भइसकेको त्यहाँका चिकित्सकले बताए,’ उषाले भनिन् ।
उषाका अनुसार राजकुमारको टाउकोको बीच भाग र मुखबाट रगत आइरहेको थियो । ‘भट्टीकी दिदीले भिनाजु धारामा चिप्लिएर लडेको भन्नुभयो तर उहाँलाई अस्पताल लैजान ट्याक्सीमा राखेपछि मात्रै हामीलाई जानकारी दिएकाले शंका लाग्यो,’ उषाले भनिन् । राजकुमारका भिनाजु नाता पर्ने विक्रम लामाले घटनाभित्र रहस्य लुकेको दाबी गरे । उनले भने, ‘म पनि टिचिङ पुगेको थिएँ । राजकुमारको शव पानीले भिजेको थियो, रगताम्य थियो, यो हत्या नै हो । प्रहरीले छानबिन गर्नुपर्छ ।’
छानबिनका लागि प्रहरी टोली
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी प्रतापसिंह थापाले घटना छानबिन गर्न महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छन् । एआईजी थापाले घटनामा स्थानीय प्रहरीको कमजोरी हुन सक्ने आशंका गर्दै छानबिन गर्ने र दोषी पाइए कारबाही गर्ने बताए ।
‘प्रहरी बिटअगाडि राति १० बजेसम्म भट्टी किन सञ्चालन गर्न दिइयो ? ट्याक्सी दुर्घटना गराएर चालक राजकुमार भट्टीमा आएर झगडा गर्दा किन अर्को पक्षलाई पक्राउ गरिएन ? सुरक्षाका लागि बसेका प्रहरीमाथि किन र कसरी अविश्वास पैदा भयो ? यी सबालका विषयमा अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने ।
उनले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गर्नेमाथि पनि कारबाही गर्ने बताए । महानगरीय प्रहरीले आइतबारै प्रहरी बिट नयाँबस्तीका सातैजना सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ सुरक्षाकर्मी खटाएको छ ।
(अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार)